အိုင်စီဂျေ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မြန်မာ နဲ့ ဂမ်ဘီယ...
25 พ.ค. 2563 - 11:33 น.
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားရာမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် နှစ်ဖက် လျှောက်ထားရမယ့်အချိန်တွေကို တရားရုံးက သုံးလစီ နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်လို့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အမှုကြီးအတွက် Memorial လို့ခေါ်တဲ့ အဆိုလွှာကို ဂမ်ဘီယာဘက်က ဇူလိုင် ၂၃ မှာ တင်သွင်းဖို့ အမိန့်ချထားပေမယ့် အခုတော့ အောက်တိုဘာလကျမှ တင်သွင်းရမယ်လို့ သည်ဟိတ်ဂ်မြို့က အိုင်စီဂျေတရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သူ ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီး အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာဘက်က တင်သွင်းရမယ့် Counter-Memorial လို့ခေါ်တဲ့ ချေလွှာကိုလည်း မူလက ဇန်နဝါရီ ၂၃ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ၃ လ နောက်ကျပြီးမှ တင်ရမယ်လို့ မစ္စတာ တမ်ဘာဒူက ပြောပါတယ်။
အခုလို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ဂမ်ဘီယာဘက်က တရားရုံးကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
''ဂမ်ဘီယာကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အမေရိကန်ရဲ့ တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ လော့ခ်ဒေါင်း ချထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့နေတွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ အလွန်အမင်း အခက်အခဲ ကြုံရပါတယ်'' လို့ မစ္စတာ တမ်ဘာဒူက ပြောပါတယ်။
နောက်ပြီး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားတာကြောင့် ဒီအမှုအတွက် လုပ်ငန်းတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဆောင်ရွက်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိတာကြောင့် တရားရုံးကို အဆိုလွှာ တင်သွင်းရက် ၃ လ နောက်ဆုတ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
တရားရုံးဘက်က ခွင့်ပြုချက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ကျလာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဂမ်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာဘက်က ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲကပဲ ICJ တရားရုံးရဲ့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက် အမိန့် လိုက်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာကို တရားရုံးထံ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာကိုလည်း ဂမ်ဘီယာဘက်က လက်ခံရရှိထားပြီး လောလောဆယ် လေ့လာနေတုန်းပဲ ရှိသေးအတွက် မှတ်ချက် မပေးလိုပေမယ့် ဒီလို တရားရုံးအမိန့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်တာက ကြိုဆိုရမယ့် အချက် ဖြစ်တယ်လို့ ဂမ်ဘီယာဝန်ကြီးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အိုင်စီဂျေ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မြန်မာ နဲ့ ဂမ်ဘီယာ နှစ်ဖက် လျှောက်ထားချိန် ၃ လ ရွှေ့ဆိုင်း